Abakhiqizi Nabahlinzeki Bensimbi Yokuncibilikisa Yensimbi | I-China Metal Sncting Industry Factory
I-Flake graphite powder
I-Natural flake graphite powder iyi-crystalline graphite yemvelo, esesimweni senhlanzi i-phosphorus. It kungokwalabo ezinamacala ayisithupha crystal uhlelo isakhiwo egqinsiwe. Inezinto ezinhle zokumelana nokushisa okuphezulu, ukuqhutshwa kukagesi, ukuqhutshwa kokushisa, ukuthambisa, i-plasticity, ukumelana ne-acid ne-alkali
Umshini aluminized graphite crucible
Lo mkhiqizo i-graphite crucible esetshenziselwa umshini wokukhanyisa umshini. I-vacuum aluminized graphite crucible ikhiqizwa ukwelashwa okukhethekile, inempilo esezingeni elide kakhulu, ngokuvamile ngaphezu kwamahora angama-45.
Ukuncibilikisa insimbi kuyinqubo yokushintsha insimbi isuke esimweni esihlanganisiwe iye esimeni samahhala. Ukusabela okwehliswayo kwekhabhoni, i-carbon monoxide, i-hydrogen namanye ama-ejenti wokunciphisa anama-oxide ensimbi lapho kushisa kakhulu angathola izinto zensimbi.
Amaringi amabili ukuhlanzeka okuphezulu kwe-graphite crucible yokuncibilikisa izinsimbi eziyigugu
Ukuncibilikiswa kwensimbi okuyigugu kuhlukaniswe kwaba ukujija nokucwengisisa. Ubumsulwa obuphezulu izinsimbi eziyigugu zitholakala ngokuncibilikisa ubumsulwa obuphansi izinsimbi eziyigugu. I-graphite crucible esetshenziselwa ukucwenga idinga imfuneko ephezulu ebumsulweni, ukuminyana ngobuningi, i-porosity, amandla nezinye izinkomba. Okubalulekile ingcindezi ye-isostatic noma i-graphite ebunjiwe ngokudipha okuthathu nokubhaka okune. Izidingo zokucubungula ziqinile kakhulu, hhayi ubukhulu bokunemba kuphela, kepha nokupholisha kwendawo. Impahla yethu ye-graphite ihlolwe ngokuqinile futhi ikhethwe ngokucophelela ukuqinisekisa ukuthi ingafaniswa namandla, umphumela wokushisa yiyona engcono kakhulu, futhi ubuchwepheshe bokucubungula kumele buhlangabezane nezidingo zokuklama.